ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု (Poverty) ဆိုရာဝယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု (Poverty) ဆိုရာဝယ်
Posted by kai on Jun 5, 2011 in Think Tank | 8 comments
ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်းဟာ ငွေဝင်နဲသွားလို့ပါ။ အခြားဟာတော့သိဝူး… :D
Laziness is the root of poverty. တဲ့လေ…
ရွံရှာလန့်ထိတ် အသံဆိတ်၏ ရယ်လို့..
ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ ရဲ့ လင်္ကာထဲမှာ သင်ခဲ့ရဖူးပါတယ်..
တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေခံပညာရေးဟာ.. ဆင်းရဲနွမ်းပါမှု.. (poverty) ကို ဖြေဖျောက်ဖို့ရာထဲက..
ကြားဖူးတာကိုပြောတာနော်.. ပညာနွံနစ်တာထက်.. စနစ်နွံနစ်တာက သာပြီးဆိုးသတဲ့..
အထက်ပါ cluster လေးခု စလုံးက ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ရင်ဆိုင်နေရတော့ကာ..
ဘယ်နွံနစ်တာလဲမသိဘူး.. (နှစ်ခုစလုံးလည်း ဖြစ်နိုင်သလား) ပေါ့လေ…
ပြီးတော့ အဲဒီ social institutions များပေါ်ထွက်လာဖို့ ဘာတွေများ ဆောင်ရွက်ရမလဲ..
ဒါတွေကသိထားပြီး ဆောင်ရွက်ရမှာမို့.. တတ်သိပညာရှင်များအနေနဲ့ ထပ်မံပြောပြစေလိုပါကြောင်း
လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဆီ..
ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ရန် အားထုတ်မှု ဆင်းရဲနွမ်းပါးနေပါပြီ…
အသိဥာဏ်ဆင်းရဲရင် ကျန်တာတွေပါ တဖြည်းဖြည်း ဆင်းရဲလာမှာပဲလို့ ထင်ပါတယ်
..သန်း၆၀မှာ အများစုရဲ့ ဘ၀တွေစုံလိုက်မှောက်နေတာတွေကို တွေ့ကြရလိမ့်မယ်..။
မြန်မာပြည်က.. ကိုးကွယ်ရာမှားနေတယ်.. တိတိကျကျဆိုရင်… ဆရာအတင်ခံရသူတွေမှားနေတယ်လို့..သုံးသပ်မိတယ်..။
တန်းပြီးမဆဲချင်နဲ့ဦး..။ မြန်မာ့သမိုင်းနှစ် ၁၀၀၀ သက်တန်းကို အပိုင်းပိုင်းဖြတ်လေ့လာကြည့်…။
(ဘာသာရေးကို အသုံးချပြီး)စစ်ဘုရင်တွေဟာ.. ဘယ်တော့မှမပြီးဆုံးတဲ့… စစ်တွေကို တခြိမ်းခြိမ်း ချခဲ့တာ..ချနေတာတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်..။
ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင်.. နောင်အနှစ် ၁၀၀ …. တခြိမ်းခြိမ်းနေဦးမှာပါပဲ…
တခြိမ်းခြိမ်းတွေကြား.. ဘ၀မှောက်နေသူတွေ… ပိုလို့သာများလာဖို့ရှိတယ်…။
ဘာသာရေးနဲ့အတွေးအခေါ်တွေ.. ဆရ့ာဆရာတွေကို ပြန်လှန်မပြောရဲ…မပြင်ရဲကြပါဘူး…
နှစ်ရာချီပြီးတော့ကို… ပြန်မလှန်ရဲအောင်… ငရဲနဲ့ခြောက်..ဘုံနဲ့မြှောက်ထားခဲ့တာ…။
( အခုလဲချောက်ထဲမှာဘဲ ) ဒီလောက်တော.ရှိမှာပေါ.ဗျ.
ဆင်းရဲတာလည်း မပြောနဲ့ လေ… ရုန်းကန်ရင်း နစ်နေတဲ့ ခေတ်မှာ … ကုတ်ခြစ်စုဖို့များ မစဉ်းစားလေနဲ့ …. ဖွတ်ကလိ ဒင်္ဂါးလေး ရလာလျှင် လက်ယားပြီး အညောင်းသွားဖြေ ၊ အထုတ်ကြီး အထုတ်ငယ်တွေ နဲ့ ၀ယ်စား ၊ မိသားစု သာရေး နာရေးတောင် မလုပ်နိုင်ပဲ မိုက်တွင်းနက်နေတော့ ဆင်းရဲတွင်း နက်သထက်နက်လာပြီပေါ့ … ။
စီးပွားရေးပါ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးလာတာမကပဲ … စိတ်ဓါတ်ရေးရာ ၊ အကျင့်စာရိတ္တတွေလည်း နွမ်းပါး ပါးလျလာတာ ..ပရုတ်လုံးလိုပါပဲ … ။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမူ = မြန်မာပြည်
ငွေရေးကြေးရေး ဆင်း၇ဲနွမ်းပါးသလို စာရိတ္တပိုင်း ၊ ကြိုးစားအားထုတ်မူပိုင်း၊ စိတ်ဓါတ်ရေးရာပိုင်းတွေမှာလဲ တကယ့်ကို ချို့ချို့တဲ့တဲ့ပါပဲ